မူလစာမျက်နှာ | Burmese Buddhist
Den Burmesiske Theravada Buddhist Forrening
မည်သည့်အယူဝါဒဖြစ်စေ ဘယ်မှာပဲဖတ်ရဖတ်ရ၊ ဘယ်သူကပြောပြော အဆုံး ငါဂေါတမက ပြောတယ် ဆိုရင်တောင်မှ မယုံပါနဲ့။ ကိုယ်တိုင် သာလျှင် သိအောင်လုပ်ကြ ကိုယ်တိုင် လက်တွေ့ လုပ်ကြည့်လျှင် မှား / မှန် ၊ဆိုး /ကောင်းကို ကိုယ်တိုင် သိမြင်ပြီးမှ လက်ခံ ယုံကြည်ကျင့်သုံးကြရန် ဖြစ်ပေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသား ထေရဝါဒ္ဓ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း (နော်ဝေ) သို့
​တန်ခူးလ ၁၀ရက် ၁၃၈၂
3 , August
နွေရာသီ ယဉ်ကျေးလိမ္မာ သင်တန်း ၂၀၁၉
ဥရောပ ဗုဒ္ဓဘာသာ လူငယ်
Dhamma Talk 2017
မြန်မာနိုင်ငံသား ထေရဝါဒ္ဓ ဗုဒ္ဓဘာသာ အသင်း (နော်ဝေ)
​ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပ ဒေ
နော်ဝေနိုင်ငံရောက် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာနိုင်ငံ သားများ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ် ယုံ ကြည်မူဆိုင်ရာ ဓ ေလ့ ထံုံးတဓလေ့ထုံးတမ်းများ ဆက်လက်ကျင့်သုံးနေထိုင်သွားနိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ ဤအသင်းအားဖွဲ့စည်းသည်။ ဤအသင်းသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ သာသနာ နှင့်် သက်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများကိုသာဆောင်ရွက်သွားမည့် ဘာသာရေး အဖွဲ့ တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ အား ဆက်ဖတ်ရန်
Klosta ligger i Uknavegen 111, 2040 Kløfta . Vi har det plan å kjøpe nytt lokal for temple.
ေ​ကျာင်းနေရာ ဒေသနှင့်် ပတ်သက်၍
၂။ ဦး ဝိသုဒ္ဓ
​၃။ ဦးထာ၀ရ (Stjørdal, Norway)
Buddhistforbundet အသင်းချုပ်မှ အသင်းသားများ ၏ email addressများ မှန်ကန်ရန် နှင့်် မရှိသေးသော အသင်းဝင်များအား ဖြည့််စွက်ပေးပါရန် ပြောကြားလာပါသောကြောင့်် မိမိ ၁၁လုံး နံပါတ်များသုံး၍ ဝင်ရောက် ဖြည့််ပေးကြပါရန်
Uknavegen 111, 2040- Kløfta. (7.91 mi)
950 09 693